Miyayna ahayn wax xanuun badan inaad shaqadaada weyso oo aad la kulanto dhibaatooyinka ka dhalan kara? Haa, laakiin iimaanku wuxuu noo xaqiijinayaa in Ilaahay daryeelo baahiyaheenna (Mat. 6,25). Miyayna xanuun lahayn in la waayo qof aad jeceshahay? Dabcan, laakiin iimaanku wuxuu noo xaqiijinayaa inaanu ku arki doonno qofkan mar kale jir cusub (1 Korintos 15,42).
Miyay tijaabad kasta ama dhibaato kasta dhib leedahay? Maya, laakiin aaminaada Ilaah ayaa nagu qancisa in Ciise uusan waligiis naga tagin, dhib kasta oo aan haysano hadda (Cibraaniyada 13,5). Wuxuu ku faraxsan yahay inuu naga fududeeyo culayskayaga (Mat. 11,28-30). Wuxuu jecel yahay inuu raaco qof kasta oo isaga isku halleeya (Sabuurradii 37,28) oo ilaali mu'minka (Sabuurradii 97,10).